Otu esi etinye ma jiri mmanya na Ubuntu 20.04 na 21.04 - LinuxCapable
July 13, 2021 June 27, 2021 by Jọshụa James
Wụnye 5.0 Wine
Wụnye 6.0 Wine
Mechaa nwụnye mmanya
Mmanya bụ oyi akwa ndakọrịta nke mepere emepe na-enye gị ohere ịme ngwa Windows na sistemụ arụmọrụ dịka Unix dị ka Linux, FreeBSD, na macOS. Ọ bụ interface na-atụgharị oku sistemu Windows ka ọ bụrụ oku POSIX nhata nke ejiri Linux yana sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ dabere na Unix.
Ị ga-amụta ka esi etinye na hazie Mmanya na Ubuntu 20.04 LTS sistemụ arụmọrụ na ntuziaka na-esonụ.
Git arụnyere na sava gị.
wget ma ọ bụ curl arụnyere
Gbaa mbọ hụ na etinyere curl na wget.
Tupu ịga n'ihu ịwụnye Wine maka Ubuntu 20.04, ị ga-achọ ime ka nhazi 32-bit dị na sistemụ arụmọrụ gị. Nke a bụ n'ihi na a na-ewu ọtụtụ ngwa Windows maka nhazi 32-bit. Nzọụkwụ mbụ bụ ịkwado multiarch, nke na-enye gị ohere ịwụnye ngwugwu 64 na 32-bit na igwe:
Ebe nchekwa Ubuntu 20.04 Focal Fossa na-abịa na Wine 5.0 site na njikwa ngwugwu APT. Nke a bụ ụzọ a na-ejikarị wụnye mmanya. Agbanyeghị, ekwesịrị ịmara na mmelite nke njikwa ngwugwu dị ụkọ. Mmanya na-eme obere mwepụta mmepe, yabụ ị ga-ahụ na ị na-ala azụ n'ikpeazụ.
Iji wụnye ụdị mmanya 5 64bit na 32bit, pịnye iwu a:
Ị ga-enweta nsonaazụ ngwungwu agbatịkwuru ndị a:
Tinye “Y” wee gaa n'ihu na ntinye. N'ozuzu, ọ ga-ewe ihe dị ka nkeji 2 ruo 3 na kacha.
Ozugbo emechara, nyochaa ụdị nke ị rụnyere site na ịpị iwu a:
Ị tinyela mmanya 5.0 nke ọma site na ebe nchekwa Ubuntu. Ọ bụrụ na ị na-achọ ụdị ọhụrụ, gaa na nzọụkwụ dị n'okpuru iji wụnye.
Ihe ndị a ga-egosi gị otu esi etinye ụdị mmanya 6 na Ubuntu 20.04. A na-atụ aro nke a karịa ka ị na-enweta ụdị mmanya kacha mma nke nwere ọtụtụ atụmatụ na ndozi ahụhụ.
Nke mbụ, budata igodo GPG maka mmanya.
Ị ga-enweta nsonaazụ:
Na-esote, ị ga-etinye ebe nchekwa WineHQ. Iji mee nke a, tinye iwu ndị a:
Tinye “Y” ịga n'ihu. Nwụnye kwesịrị iwere nkeji 2 ruo 3 dịka 5.0 gara aga site na njikwa ngwugwu APT. Rịba ama, ihe atụ nke nrụnye 6.0 nwere ike na-efunahụ ndepụta ogologo nke ngwugwu achọrọ site na ntinye 5.0, nke nwere ike igosi na ntinye gị. Nke a dị mma.
Rịba ama, nọmba ụdị a kwesịrị ịgbanwe n'oge, na mmepụta bụ naanị ihe atụ.
Iji malite mmanya, mee iwu "winecfg" site na ọdụ Ubuntu gị. Iwu a ga-aga n'ihu ịwụnye Mono na Gecko wee tọọ gburugburu Wine.
Pịa “wụnye"Iga n'ihu site na Mono gaa Gecko Installer.
Ọzọ, pịa "wụnye” bọtịnụ ka ịga n'ihu imecha nrụnye ahụ.
Ozugbo ịmechara nrụnye, a ga-egosi mkparịta ụka nhazi mmanya. Na ngalaba nke ngwanro a, ị nwere ike hazie ntọala mmanya dị iche iche.
Ntọala ndabara kwesịrị ezuru n'ọtụtụ ọnọdụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị ga-agbanwe ihe ọ bụla, ọ ga-abụ ụdị Windows nke na-emebi Windows 7 na ihe na-adịbeghị anya, dị ka Windows 10.
Ozugbo emechara, mechie igbe mkparịta ụka.
Na nkenke ọmụmaatụ, anyị ga-eji Wine tinye ngwa nkata telegram. Rịba ama na nke a na-abịa n'ụdị na ngwugwu Linux, mana anyị ga-eji Wine tinye ụdị Windows na sistemụ arụmọrụ Ubuntu 20.04 anyị maka ebumnuche nduzi.
Nke mbụ, nbudata Telegram "Versiondị Windows".exe ngwugwu.
Ọzọ, gaa na ndekọ nbudata gị wee pịa aka nri .exe nke ngwa Telegram anyị chọrọ ịwụnye.
Pịa aka nri .exe, ugbu a ị ga-ahụ "Mepee na ihe nchọgharị mmanya“, pịa ya ka imepe ngwa Windows na sistemụ arụmọrụ Ubuntu 20.04 gị.
Ọzọ, ị ga-ahụ igbe ntọala pụtara maka Telegram.
Họrọ asụsụ gị wee pịa OK.
Na-esote, bụ ụzọ nrụnye nke ndabara. Dị ka ị na-ahụ, ọ nwere ụzọ nrụnye ndabara yiri Windows, "C: ndị ọrụ bytesboss Ngwa DataTelegram Desktop". Awụnyere ngwa Windows n'ọtụtụ sistemụ dabere na Linux na "~/.wine/drive_c/” ndekọ.
Hapụ dị ka ndabere, wee pịa na-esote ka ịga n'ihu na nrụnye.
Na nzọụkwụ na-esote, ị nwere ike ịgbanwe folda ahụ, emetụla nke a aka. Ihe ndabara kwesịrị ịdị mma. Nhọrọ, ị nwere ike ịpụ na ịmepụta folda menu mmalite site na ịhọrọ "Emepụtala nchekwa menu mmalite".
Pịa bọtịnụ na-esote ka ịga n'ihu na ibe na-esote. Ozugbo ịmechara nke a, ị ga-enweta nhọrọ ọhụrụ iji "Mepụta ụzọ mkpirisi desktọọpụ". Site na ndabara, ahọpụtara ya. Ọ bụrụ na ịchọghị nke a, wepụzie ma pịa Osote.
N'ikpeazụ, ị ga-ahụ nchịkọta nke nhọrọ ndị ị họrọla. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe ihe ọ bụla, ugbu a bụ oge. Ọ bụrụ na ọ dị mma, pịa "wụnye” iji mechaa echichi nke Telegram.
N'ozuzu, nrụnye kwesịrị iwe ihe na-erughị 10 sekọnd ozugbo emechara. Ị ga-ahụ ihe ndị a:
Pịa "Imecha"bọtịnụ, wee malite Telegram.
Ekele, mmanya gị na-arụ ọrụ nke ọma iji wụnye ngwa Windows na sistemụ Ubuntu 20.04 gị.
Iji chọta Telegram n'ọdịniihu, ị nwere ike ịchọpụta Telegram, yana nhọrọ iwepụ na Menu Ngwa gị.
Rịba ama na ị ga-achọ ka etinye mmanya na-adịgide adịgide iji jiri mmemme ndị a mgbe etinyere na sistemụ arụmọrụ gị.
N'ime ntuziaka ahụ, ị ​​mụtala ka esi etinye mmanya, gụnyere ngosipụta nke ịwụnye ngwa Windows .exe site na iji mmanya na sistemụ Ubuntu gị. N'ozuzu, mmanya bụ mmemme magburu onwe ya na ụfọdụ ezigbo uru na-ejikọta Windows na Linux maka onye ọrụ.
Categories Ubuntu Tags Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa, Mmanya Mail igodo
Otu esi etinye Gitea na Ubuntu 20.04 na SQLite 3